Ukuphupha ngomvundla Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Njengomvundla, umvundla unxulunyaniswa ikakhulu neempawu ezintle. Unentloni kwaye ufuna ukusindiswa kwakhe xa ebaleka. Nangona kunjalo, kuba iphinda ivelise ngokukhawuleza okukhulu, inokungathandwa kwimimandla ethile. Njengomvundla omdaka wasendle, iba yinto efunwa kakhulu emva kokuzingelwa ngabazingeli njengoko kunokubangela umonakalo kubalimi, ngakumbi emasimini. Inokufunyanwa njengomvundla wendlu okanye umvundla ozinzileyo kwaye uyathandwa ngabantwana njengebhaskiti yePasika.
Ngamanye amaxesha sisebenzisa igama elithi "umvundla" kwimeko eyahlukileyo kunenja entle enamehlo amade. I-Bunny ihlala iligama lothando kulowo umthandayo kwaye ayinanto yakwenza noMeister Lampe ngalo mzuzu. Endaweni yoko, kukubonakalisa uthando kubutyebi bethu kwaye kukwabonisa ubudlelwane obusondeleyo kunye nosapho phakathi kwethu.
Siyayazi nembono yomvundla owoyikayo. Ukunxibelelana nesilwanyana saseMümmler kuyacaca xa umntu ecinga ngendlela iHoppler eyoyika ngayo indalo xa ibaleka xa isondela kuye. Ke ukuba sibiza umntu unyawo lukanogada, sichaza ukuba uligwala, ligwala.
Iphupha lomvundla linokuchazwa ngeendlela ezininzi ngophando lwangoku lwamaphupha. Iimeko ezichanekileyo ephupheni ziya kunceda ekutolikeni ngokuchanekileyo.
1 Uphawu lwephupha «umvundla» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «umvundla» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «umvundla» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «umvundla» - ukutolikwa ngokubanzi
Imivundla inokuvela ephupheni kwiimeko ezahlukeneyo. Bahlala befuzisela ukuchuma kunye Ukwabelana ngesondo. Ukuba indoda ibaleka emva komvundla ephupheni, emva koko ifuna imicimbi enjalo yothando. Ukuba umfazi uphupha ngokufaka umvundla, oku kubonisa umnqweno wakhe wokuba nabantwana.
Nangona kunjalo, umvundla unokuba ngumqondiso wokuba iphupha liya koyika into ethile. Kule meko ngumzekeliso Ixhala. Ukuba uMümmelmann uyabaleka ephupheni, ke, njengomvundla, into enexabiso nayo iyakunyamalala ephupheni.
Ukuba umvundla uleqwa zizinja ephupheni, lo mfanekiso wephupha uthetha imbambano phakathi kwabahlobo. Ukuba umvundla udutyuliwe kunokubangela ingxaki kusapho okanye ukulahleka komhlobo olungileyo. I-rammer efileyo ephupheni inokuchazwa njenge ukufa yomhlobo.
Ukuba iphupha libambe umvundla ebuthongweni balo, oku kuthetha uloyiso kwaye kuthetha ithamsanqa. Ukutya umvundla owosiweyo kukwasetyenziswa kuphando lwamaphupha njenge Uphawu lwethamsanqa Itolikiwe
Uphawu lwephupha «umvundla» - ukutolikwa kwengqondo
Kutoliko lwengqondo ngokwamaphupha, umvundla usetyenziswa njengophawu lwe Ukuchuma itolikwe. Olu toliko lunokubhekisa kuzo zombini amandla esondo kunye nokudibana okungathandekiyo. Ukongeza kokuchuma kwezilwanyana, lo mfanekiso wephupha ukwayanyaniswa ne umsebenzi wengqondo kunye nemeko yengqondo yephupha.
Iphupha lomvundla linokubonisa ukuba iphupha elo kufuneka lisebenze kubomi bakho bokuvuka kwaye kufuneka woyise uloyiko lwakho kunye nokuthandabuza. Ke akufuneki Yenziwe kwaye ayisabaleki ikhonkxa ikhonkco.
Ukuba indoda iphupha ukuba idubula umvundla, oku kuhlala kubonakalisa umnqweno wokumela owayo iminqweno yesini. Kwiphupha lomfazi, ngakumbi, uboya bemvundla bumela isidingo sakhe. ukuqonda.
Uphawu lwephupha «umvundla» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwamaphupha okomoya, umvundla sisilwanyana senyanga sokuzala kwaye ke naso simele Ukuhlaziywa kobomi.